यसकारण उपेन्द्रलाइ मधेशी जनजातिलेदिए राजा बिरेन्द्रपछि देशलाई माया गर्ने नेताको संज्ञा ! – Sanghiya Online
यसकारण उपेन्द्रलाइ मधेशी जनजातिलेदिए राजा बिरेन्द्रपछि देशलाई माया गर्ने नेताको संज्ञा !
Posted on : October 25, 2017 October 25, 2017 - No Comment
पछिल्लो समय उपेन्द्र यादवले राजनेता हुने चरित्र देखाएका छन् । नेपालको राजनीतिमा निष्टाको राजनीति कहिकतै नपाइएको बेला उपेन्द्र यादवले देशले प्राप्त गरेको उपलब्धीलाई संस्थागत गर्दै देशलाई नै निकास दिने गरी राजनीतिक त्याग देखाएका छन् ।
पहिलो संविधानसभाको चुनावपछि सरकार र सत्ताको भोगी भन्ने ट्याग लागेका मधेसवादी दलहरुले पछिल्लो निर्वाचनपछि संविधानतः आफ्नाे अधिकार नलेखिएको भन्दै आन्दोलनलाई अगाडि बढाए ।
२०७० सालको दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा मधेसवादी दलका अध्यक्षहरुमध्ये उपेन्द्र यादव र महेन्द्र यादवले मात्रै जित हासिल गरेका थिए ।
अरु मधेसवादी नेताहरुले आफ्नाे श्रीमती र सम्धिनीलाई समानुपातिकमा सांसद बनाएर बसेका बेला उपेन्द्र यादव भने पार्टी विस्तार तथा समायोजनतिर लागे ।
जब संविधानसभाबाट संविधान घोषणा भयो उनले उक्त संविधान अन्तरिम संविधानभन्दा पनि पश्चगामी भएको भन्दै संविधानविरुद्ध आन्दोलनको घोषणा गरे । आन्दोलनलाई सशक्त र मजबुद बनाउन चारतिर छरिएर रहेका सबै मधेसवादी दलहरुलाई एउटै सुत्रमा बाँध्न उनी सफल भए ।
भनिन्छ – ‘महन्थ ठाकुरको त सुतिरहेको बेडमै पुगेर उनलाई उठाएर बैठक गरेका थिए ।’ आन्दोलनले सशक्त रुप लिँदै गर्दा सरकारसँग वार्ता र संघर्ष सँगसँगै लाने उपेन्द्र यादवले नीति लिएका थिए ।
आन्दोलनको बेला कडा अभिव्यक्ति दिने, वार्तामा कठोर रुपमा प्रस्तुत हुने र आफ्नाे माग पूरा नभएसम्म संविधान कार्यान्वयनका लागि निर्वाचन हुन नदिने अभिव्यक्ति दिने उपेन्द्र यादव अन्ततः सरकारले घोषणा गरेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा पहिलो चरणबाटै सहभागी भए ।
उनी निर्वाचनमा भाग लिएपछि मधेसी मोर्चाका बाँकी दलहरुले उनलाई मधेसविरोधी, मधेसप्रतिको गद्दार आदि संज्ञा दिए । तर उपेन्द्र यादवले आफ्नै माटोले मागेकाले चुनावमा भाग लिएको भन्दै ‘बोल्ड डिसिजन’ गरे । अन्ततः उनलाई मधेसविरोधी भन्ने र उनीप्रति अत्यन्त तिक्तता अभिव्यक्ति दिने मधेसी दलका नेताहरु पनि उनकै पछिपछि लुरुलुरु चुनावमा भाग लिन आइपुगे ।
चुनावको परिणामलाई मध्यनजर गर्दै अरु मधेसी दलले फेरि उपेन्द्र यादवलाई नेता मानेर चुनावमा नगए चुनावको राजनीतिक धु्रवीकरणमा आफूहरु हराउने महसुश गरेर उपेन्द्र यादवसँगै गठबन्धन बनाउन तयार भए ।
राजनीतिमा अब्बल खेलाडी दर्ज भइसकेका उपेन्द्र यादवले अहिले आफूलाई राजनीतिको मूल केन्द्र विन्दुमा उभ्याउन सफल भएका छन् ।
चाहे त्यो कांग्रेस र माओवादी गठबन्धनको सरकार होस वा कांग्रेससँग हुने भनिएको चुनावी गठबन्धनको बार्गेनिङ होस, त्यसमा उनले आफ्नाे राम्रो उपस्थिति देखाएका छन् । मधेसवादी गठबन्धनलाई उसले मागेको सिट संख्या दिने हैसियत नै नदेख्ने कांग्रेसलाई आफूसँग रहिरन बाध्य तुल्याइदिएका छन् ।
पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम सरकार परिवर्तनको चर्चा सुरु भएको छ । यसबीचमा नेपाली कांग्रेसले सत्तारुढ दल माओवादी केन्द्रका मन्त्रिहरुलाई बर्खास्त गरी सरकार पुनर्गठन गर्ने तयारी गरेका थिए । यस निम्ति प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उपेन्द्र यादवले सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गरे । प्रधानमन्त्रीले उपप्रधान र गृहमन्त्री सहित उपेन्द्र यादवलाई सरकारमा सहभागी हुन अफर गरेको भए पनि उनले सत्ता र सरकारलाई प्राथमिकतामा राखेनन् ।
अहिलेको अवस्थामा सरकार परिवर्तनको खेलमा लाग्दाखेरि मंसिरमा हुने निर्वाचन नै प्रभावित हुने र संवैधानिक संकट आउने र फेरि पनि प्रतिगामीहरुले चलखेल गर्ने ठाउ पाउने भएकाले देशको निकासका लागि उनले पद र शक्तिलाई त्याग गरे ।
यसर्थ पनि उपेन्द्र यादव अहिलेसम्मका इमानी जमानी नेता रहेको प्रमाणित हुन्छ । उनले प्रशस्त राजनैतिक इमान्दारिता देखाए । हिजोसम्म धारे हात लगाएकाहरुले पनि उपेन्द्र यादवको चरित्र देखेर नतमस्तक भएका छन् । उनी उत्पीडनमा परेका जनताको मुक्तिको आवाज बनेर तेस्रो धारको मुख्य नेताको रुपमा उदाएका छन् ।
उनी विगतका सरकारहरुमा पनि पटकपटक उपप्रधानमन्त्री भइसकेका र उनले सम्हालेका मन्त्रालयमा उत्कृष्ट प्रशासकको नमूना प्रस्तुत गरिसकेका छन् । यस अर्थमा पनि अब देशलाई नेतृत्व गर्ने त्यस्तो राजनेता चाहिएको छ जसले मुलुकमा विद्यमान सबै खाले जातीय, क्षेत्रीय, लैगिक उत्पीडन र असमानताहरुलाई हल गर्दै देशको समृद्धि र विकास गर्न सकोस ।
उनी प्रधानमन्त्री हुँदा देशमा भएको पहिचानको आन्दोलनको पनि सम्मान हुने लामो समयपछि यो देशमा गैर बाहुनक्षेत्री प्रधानमन्त्री हुने यो देशमा सबै जनताका सबै खाले पहुँचमा पुग्ने आशा जागेर एक सुत्रमा बाधिने छन्
पुराना पञ्चहरु नै अहिले भन्न हालेका छन् राजा विरेन्द्र पछि यो देशमा जनतामा सम्पुर्ण अधिकार निहित हुनु पर्छ भन्ने नेताको रुपमा अहिले उपेन्द्र यादवलाई लिन सकिन्छ । सबै जात जातीहरुले यो देशमा शासनको पहुचमा पुग्नु पर्छ । यसरी उनलाई अब एक जात वा समुदाय भन्दा सम्पुर्ण नेपालीको नेताका रुपमा हर्न सकिन्छ ।
देशमा अराजकता, जातीय झगडा र असमझदारी बढाउने एउटा उपाय हो – क्रिश्चियन धर्म
साबधान ! भोट दुई बोतल रक्शी,खसी, राँगा काटेर खुवाउने र दुई चार पैसा दिने भरमा भोट नदिनु होस !
अनलाईन पठन पाठन र यस सँग उब्जिएका केहि प्रश्नहरु : दुर्गा प्रसाद आचार्य
एस एन मेहताको प्रश्न – इनरुवा नगरपालिकाको समग्र बिकास निर्माणको लागि कुनै नेता ,सभासद,मन्त्रीहरुको ध्यान किन गएन ?
“च्योमोलुङमा किरात प्रदेश” को लागि मुख्यमन्त्री शेरधन राइलाइ आयो खुल्ला पत्र
परिवर्तनको जन्म चुनाबी प्रक्रियाव्दारा नभएर क्रान्ति र आन्दोलनको गर्भवाट हुन्छ- नबिन रोका मगर
यसकारण कांग्रेसबाट अपनायो फोरम र राजपाले सतर्कता, कांग्रेस स्विट पोइजन भएको निष्कर्ष